Iimfama kunye nombane ugesi
Iimfama kunye nombane wamandla, njengomzekelo wentuthuko yezobugcisa, baye bathatha indawo yabo kwindlu yethu, abayisebenzisi nje njengeminyango, kodwa bahlanganiswe kwinkqubo yokuphucula umoya. Kwimeko apho ukuvula ii window kuyinkathazo enkulu, ukufunyanwa kwimizekelo enjalo kuphela indlela efanelekileyo yokubonelela yakho intuthuzelo.
Iintlobo zamakhethini azenzekelayo:
I-Horizontal iyimfama imoto.
Inkqubo elula yokulawula umbane wendlela yokusetyenziswa kweemveliso ezininzi ixhotywe ngeemodyuli ezimbini ezinokuzenzelela ukuba ufake ii-slats kwinqanaba elifunayo, kwaye ukwandisa isantya, ukulawula ukuphakamisa kwabo. Unyaka ngamnye iindlela zokulawula iimfama zigqibeleleyo. Sifanele sigcine indlela yokutshintshela iqhosha elizayo kwiplani yeprogram, ngokukhawuleza idlulisela ubunzima kwikhompyutha.
Izalathisi ezizenzekelayo zinyamezele.
Kunzima ukuthola iifestile apho iifalini ezingenakulungiswa khona, ngokohlobo lwabo lukhulu kakhulu. Umbane wombane, ophezu komda weeves, ufihla ipaneli ehleliweyo. Esinye isisombululo singasisebenzisi ngaphaya kwe-8 m yobude be-cornice.
I-Roller iyimfama imoto.
Ukuba ukhethe i - system blind blinder, ulawulo olude okanye utshintshi luyakusindisa ixesha elininzi. Ukunyuka kweemoto zombane kwenziwa ngaphakathi kwe-shaft, apho ilinen inxeba okanye kwicala layo.
Iimpawu eziyimpumputhe ngokuhamba kombane.
Iimveliso zibonelela i-cornice ekhethekileyo, kulo mzekelo kunye ne-electrically built-in drive. Ngokuxhomekeke kwimeko, zisetyenziselwa ukulawula okanye ukulawula kude.
AmaRoma ayimfama ekulawuleni ngokuzenzekelayo.
Incamango yokuqokelela ikhethini kwimiqolo yayifike kuthi kususela kumaxesha amandulo. Singawuphucula kuphela ngokukhetha amathenda amasha, ukutshintsha indlela yokuthutha kunye neendlela zokuphatha. AmaRoma ayimfama kwiifestile zombane eneenjini zombane ezakhiwe kwi-cornice, elawulwa kwi-console okanye ipaneli ekhethekileyo.
Kukho iinkqubo ezinokuphathiswa ngokugcwele ulawulo lwezindlu, umzekelo, "Ikhaya leMicrosoft". Phakathi kwemisebenzi yayo eninzi, ukulawula okuzenzekelayo phantse zonke iintlobo zamakhethini.
Isakhiwo samanje sokuhlambela
Sula iifowuni ngokukhanyisa
Ukufakela kwendlu - ukulungiswa kwezandla
Ukujongana nezitena ezincinci
Ithebhile imele iTV
Ngumuphi umbala ofanele ndipende iindonga?
Isibonda sePlastiki sabadwebi
Isikhumba sokufakelwa kwefenitshala
Ukujongana nendlu yeenkuni - yiyiphi into engcono?
I-porcelain stoneware phantsi komthi phantsi
USinead O'Connor uxele malunga nezicwangciso zokuzibulala
Classic "Medovik" - iresiphi
Sitshabalalisa njani iinkampani zokwakha: iinyaniso ezili-9 ezimbi malunga nezakhiwo ezintsha
I-Kitchen apron eyenziwe yi-MDF
I-Zucchini kwi-oven - zokupheka kwiitya zokutya ezizonandi kakhulu
Yintoni enokugqoka iebhuluthi eziphuzi?
Isikhwama se-Orange - kunye nento enokugqoka i-accessory ecacileyo?
Utywaba kunye nesiphithiphithi
Squash njengeipinaple ebusika
I-eggplants ye-Aubergine egcwele iinqwelo kunye negalikhi
Ingubo yomtshato ngesitayela saseSpain
UHeather uvela esibindi
Emangalisayo ngokulandelayo: umfazi womdlali webhola u-Antonio Cromarty wazala umntwana wesithupha emva kwe-vasectomy yomyeni wakhe!
I-Banks yaseTyra ibonise unyana weeveki ezimbini
Iibhotile zehlobo zasehlotyeni
Imidlalo yekhompyutha yezingane
Ukucoca isinyithi ekhaya - iingcebiso ezifanelekileyo kunye neengcebiso zokucoca ngokucokisekileyo